Olona roa no maty tamin'ny fitifirana trano fandraisam-bahiny Hyatt Ziva Riviera Cancun
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Olona roa no maty tamin'ny fitifirana trano fandraisam-bahiny Hyatt Ziva Riviera Cancun
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Crime • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • People • Resorts • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Olona roa no maty tamin'ny fitifirana trano fandraisam-bahiny Hyatt Ziva Riviera Cancun.
Nilaza ny Sekreteram-panjakana misahana ny Filaminam-bahoaka ao amin'ny fanjakan'i Quintana Roo any Meksika fa olona roa izay “heverina ho mpivarotra rongony” no maty, saingy nampiany fa tsy nisy mpizaha tany naratra mafy na nisy naka an-keriny.
Teo amin’ny manodidina ny trano fandraisam-bahiny 5 kintana Cancun no nisy ny tifitra variraraka ny alakamisy tolakandro.
Nentin'ny mpiasan'ny Hyatt Ziva Riviera Cancun niafina ireo vahiny tao amin'ny toeram-pitsangatsanganana tao anatin'ny tatitra momba ny fifampitifirana.
Ny vaovaon'i Meksika dia nitatitra fa nisy mpizaha tany iray notsaboina noho ny “ratra madinidinika” tsy voafaritra taorian'ilay tranga.
Teo amin’ny manodidina ny kintana 5 no nahafantarana ny fitifirana Hyatt Ziva Riviera Cancun resort in Meksika ny alakamisy tolakandro.
Araka ny tatitra mifanipaka, nisy jiolahy na jiolahy nanatona ilay toeram-pialan-tsasatra, toerana fizahan-tany malaza ho an'ny Amerikanina, avy any amin'ny tora-pasika mifanila ary nanomboka nitifitra.
Nentin’ny mpiasa niafina haingana ireo vahiny sy mpiasa tao anatin’ny tatitra momba ny fifampitifirana.
Ireo vahiny raiki-tahotra dia nanoritsoritra lehilahy iray nirongo basy nanatona ilay toeram-pialofana nitokana avy teo amoron-dranomasina ary nitifitra teo afovoan'ny lalao volley. Nisy ihany koa ny vaovao voaray fa nitondra “basy” ireo mpitifitra na nitifitra rehefa nidina tao amin’ilay toeram-pialan-tsasatra.
Farafahakeliny roa voarohirohy ho andian-jiolahy maty tamin'ny fifampitifirana, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Filaminam-bahoaka tao Meksikahoy ny fanjakan'i Quintana Roo.
Araka ny filazan’ny tompon’andraiki-panjakana dia olona roa “heverina ho mpivarotra rongony” no namoy ny ainy saingy tsy nisy mpizaha tany naratra mafy na nisy naka an-keriny.
Nohamafisin’ny mpampanoa lalàna jeneralin’ny fanjakana taty aoriana fa fifampitifirana andian-jiolahy no nitrangan’izany, ary nilaza fa teo amoron-dranomasina tsy lavitra ny toeram-pisakafoanana no nitrangan’izany.
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, mpizaha tany iray no notsaboina noho ny “ratra madinidinika” tsy fantatra mazava taorian’ilay tranga.
Tao anatin'ny adiny iray taorian'ny fifampitifirana dia navela hiverina ho any amin'ny fandraisana ny hotely ireo vahiny.
Mpitondra tenin'ny Hyatt Ziva Riviera tao Cancun dia nilaza fa ny mpiasan'ny hotely dia "nirotsaka avy hatrany tamin'ny manampahefana ao an-toerana" izay voalaza fa teny an-toerana nanao fanadihadiana.
Ny masoivohon'i Etazonia ao Meksika nilaza fa mijery ny tatitra momba ny tifitra.
Nisy fifampitifirana voarohirohy ho andian-jiolahy tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra malaza iray hafa tao Tulum, 80 kilaometatra atsimon'i Cancun, nahafaty mpizahatany vahiny roa ary naratra telo hafa tamin'ny volana lasa teo, taorian'izay dia nalefa ny mpitandro ny filaminana Meksikana mba hanohana ny manampahefana ao an-toerana.
Taorian'ny tranganà andian-jiolahy maromaro tao amin'ny faritra izany, anisan'izany ny famonoana polisy iray tao amin'ny tanànan'i Playa del Carmen teo akaiky teo tamin'ny faran'ny volana Oktobra.